Marcos Alonso oo chelsea ka dalbanaya Sanad dheeri ah. Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Marcos Alonso oo chelsea ka dalbanaya Sanad dheeri ah.
Marcos Alonso oo chelsea ka dalbanaya Sanad dheeri ah.
Daafaca wadanka spian iyo kooxda cheslea Marcos Alonso ayaa doonaya qandaraas cusub oo Chelsea ah xidiga Marcos Alonso ayaa rajeynaya inuu qandaraas cusub u saxiixo Chelsea sida ay shaaca ka qaaday The Sun.
30 jirkaan daafaca bidix ka ciyaara ayaa ka dhacay booskiisa Stamford Bridge intii uu ka hoos ciyaarayay Frank Lampard, laakiin wuxuu dib ugu soo laabtay safka hore ee markii uu shaqada qabtay tababare Thomas Tuchel.
Qandaraaska Alonso wuxuu dhacayaa 2023, laakiin wuxuu doonayaa 12 bilood oo dheeri ah in loogu sii daro waxaase la ogeen in chelsea ay ka aqbali doonto codsigiisa kooxda chelsea ayaa heysata dhowr xidig oo ku wanaagsan dhanka daafaca bidix.
Previous articleBarcelona oo soo saartay liiska shanta weeraryahan ee Suuqa ka dooneyso
Next articleManchester United oo isha ku heysa laacibka kooxda Everton ee Jarrad Branthwaite